Android အတွက်အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်းငါးခု | Androidsis
Android အတွက်ဂိမ်းအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Android ထုတ်ကုန်များ၏သုံးစွဲသူများအားလုံးသည်ဂိမ်းကိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းရှာဖွေနိုင်သည်။ ကြာမြင့်စွာကတည်းကပတ်ပတ်လည်ခဲ့အသုံးပြုသူများအကြားအလွန်ရေပန်းစားသောအမျိုးအစား, အဲဒါကဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်းပါ။ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်မြို့တည်ဆောက်ရန်ရှိသည်သောဂိမ်းများ။
ယခုလက်ရှိ၌ဤဂိမ်းများစွာကို Play Store တွင်ရနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများစွာ၏ထင်မြင်ချက်အရရွေးချယ်မှုသည်ရှုပ်ထွေးသည်။ ဒါကိုစိတ်ထဲထားပြီး ကျွန်တော်တို့ဟာ Android အတွက်အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်းတွေနဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ထားပါတယ်. အဘယ်ဂိမ်းများကိုစာရင်းပြုစုကြသနည်း
ဤစာရင်းရှိဂိမ်းအများစုကိုအသုံးပြုသူများသိသည်။ ဒါကြောင့်သင်အချို့ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အံ့သြသွားလိမ့်မည်မဟုတ်။ သို့သော်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်းများတွင်ဤအမျိုးအစားတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
3 City Island4Sim Town ကျေးရွာ
4 အနောက်ဘက်သို့: Cowboys အန္တရာယ် Ranch!
5 2020: ငါ့နိုင်ငံ
Android အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်းတစ်ခု။ ၎င်းတွင် ၁၀ သန်းကျော်သော download များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအကြားတွင်အလွန်ရေပန်းစားသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂိမ်းထဲမှာငါတို့တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြို့တော်ကိုဖန်တီးပြီးအရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပါ လေဆိပ်သို့မဟုတ်ဘူတာရုံကဲ့သို့တူညီသောသည်။ ငါတို့သည်လည်းသင်၏ဘဏ္finာရေးဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရရန်ရှိသည် မြို့တော်သည်လည်းကောင်း၊.
ဒီဂိမ်းကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အတွင်း၌ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဝယ်ယူမှုကိုတွေ့သည်။
ရေးသားသူ: လူမှုရေး Quantum, Ltd
SimCity ဂိမ်းများကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူသိများသည်။ Android ထုတ်ကုန်များနှင့်ကွန်ပျူတာများတွင်ပါ။ သူတို့ဟာငါတို့ရှာတွေ့နိုင်တဲ့ဂန္ထဝင်မြို့တည်ဆောက်ရေးဂိမ်းများဖြစ်သည်။ သူတို့ဗားရှင်းအသစ်စတင်နေကြသည်သော်လည်း။ အခြားပို့ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစစ်ဆင်ရေးသည်များစွာပြောင်းလဲမှုမရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်မြို့တည်ဆောက်ရန်နှင့်မြို့တော်ဝန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်သေချာအောင်လုပ်ရမယ်၊
Android အတွက်ဒီအဆောက်အ ဦး ဂိမ်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ၎င်းအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူမှုနှင့်ကြော်ငြာများကိုတွေ့ရသော်လည်း
City Island4Sim Town ကျေးရွာ
Google operating system အသုံးပြုသူများအကြားလူကြိုက်များသောနောက်တစ်ခေါက် Saga ။ အဘယ်အရာကိုဒီဂိမ်းကွဲပြားခြားနားစေသည်ငါတို့ရန်ဖြစ်ပါသည် ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ကျွန်းမြို့ကိုတည်ဆောက်။ ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအချို့ထပ်မံအခက်အခဲများရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင်ဒီအမျိုးအစားရဲ့တခြားဂိမ်းတွေနဲ့သိပ်မဝေးပါဘူး ၎င်းသည်ထူးခြားဆန်းပြားသောကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောအချက်က၎င်းကိုအလွန်ထိတွေ့စေသည်။
ဒီဂိမ်းကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အတွင်း၌ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်ကြော်ငြာများကိုတွေ့ရသည်။
City Island4- မြို့ပုံခြင်း - ကျေးရွာတည်ဆောက်သူ
ရေးသားသူ: sparkling Society က - မြို့စီးတီးဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်းများကိုတည်ဆောက်
အနောက်ဘက်သို့: Cowboys အန္တရာယ် Ranch!
ဒီဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ် ကျနော်တို့အနောက်ဘက်ချောက်၌မှီဝဲတယ်။ ဒီတော့ငါတို့မြို့သစ်ကိုဒီနေရာမှာတည်ဆောက်ရတော့မယ်။ ထို့ကြောင့်တည်ဆောက်ပုံနှင့်တည်နေရာသည်ဤအချိန်နှင့်လုံးဝကွာခြားသည်။ ဒါ့အပြင် ငါတို့သည်လည်းဂိမ်းထဲမှာဘဏ္treာကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်၎င်းမှာအလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ရှိတယ်။ သင်တို့သည်လည်းရန်ရှိသည် သင့်ရဲ့ဂရပ်ဖစ်မီးမောင်းထိုးပြ, သောစာရင်းပေါ်ရှိအခြားဂိမ်းများနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော။
Android အတွက်ဒီအဆောက်အ ဦး ဂိမ်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အတွင်း၌ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်ကြော်ငြာများကိုတွေ့ရသည်။
ရေးသားသူ: PopReach ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်း
လူသိများတဲ့ Saga နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ကျနော်တို့စာရင်းကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကဏ္။ သည်အနာဂတ်မြို့တစ်မြို့ကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်စီမံရန်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဂိမ်းရဲ့ဗိသုကာနဲ့ဂရပ်ဖစ်တွေကိုအထင်ရှားဆုံးကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ သူတို့သည်အလွန်ကောင်းသောအတုယူသောကြောင့်အနာဂတ်၏ကြီးမားသောမြို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်လည်းတွေ့ဆုံရန်သွားကြသည် ကျနော်တို့တိုးတက်နိုင်ရန်အတွက်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ရှိသည်သောမစ်ရှင်အမျိုးမျိုး။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာမြို့တော်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရန်ဖြစ်သည်။
ဒီဂိမ်းကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အတွင်း၌ရှိသော်လည်းယခင်ဖြစ်ရပ်များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်ကြော်ငြာများကိုတွေ့ရှိရသည်။
ရေးသားသူ: ဂိမ်း Insight ဂန္ထဝင်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Android အတွက်အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်းများ
Android အတွက် Google Drive အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများ